Kooxda Real Madrid oo ku soo biirtay tartanka saxiixa da’yarkii hore ee Manchester City – Gool FM
(Madrid) 26 Maajo 2020. Naadiga Real Madrid ayaa lagu soo warramayaa inay ku soo biirtay loollanka loogu jiro saxiixa da’yarka Schalke 04 ee Rabbi Matondo.
Xiddigii hore ee Manchester City ayaa u muuqday inuu bartilmaameed u yahay Kooxaha Manchester United iyo Liverpool kaddib xilli ciyaareed uu ku qaatay horyaalka Bundesliga ee dalka Jarmalka.
Xiddiga reer Wales ayaa dhawaan ku adkeystay inuu diirada saarayo inuu ku dhammeysto xilli ciyaareedkiisa kooxdiisa Schalke, laakiin wararka xanta ah ee ku saabsan mustaqbalka 19-sano jirkaan ayaa weli sii socon doona.
Wargeyska lagu magacaabo Diario ayaa wuxuu sheegaya in Real Madrid ay il gaar ah ku heyso horumarinnada ku xeeran Matondo, iyadoo Kooxda Tababare Zinedine Zidane ay mudnaanta siineyso la soo saxiixashada ciyaartoy cusub oo soo socda ka hor suuqa kala iibsiga xagaaga.
Matondo ayaa ka soo muuqday labada kulan ee Schalke tan iyo intii dib loo bilaabay Bundesliga – isagoo ciyaaray 77 daqiiqo kulankii guuldarrada 3-0 ah ay ka soo gaartay Augsburg Axaddii.
Laacibkan u dhashay dalka England ayaa kooxda Schalke 04 wuxuu kooxdiisa u saftay labo kulan oo qura, xilli uu xiddigan soo maray dhowr kooxod oo ay ka mid tahay Man City iyo Cardiff City kuwaas oo ka dhisan dalka England.